မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: နှုတ်ဆက်ပါတယ်.... (ပြန်လာမယ်. ပြန်ချစ်မယ်..)
Posted by mabaydar at 8:40 PM
ညီမလေး တာ့တာ ...ပျော်ရွှင်ပါစေ...
အမလေး သွားလေသူကြီးရဲ့...။ အီး ဟီး ဟီး ဟဲ ဟဲ :P
ကျနော့်အတွက်လည်း တစ်ယောက်လောက် လှလှလေး ၀ယ်ခဲ့ပေး =)
အဆင်ပြေချောမွေ့ Video များများရိုက်နိုင်ပါစေ..
LH တို့ကတော့ သွားပြန်ပြီ... ကောင်းပ ညီမရယ်.. အားကျလိုက်တာ... ၁ယောက်တည်းလား.. ma SP နဲ့ ma MM ရောလား.... ပျော်ပါစေ
안녕히 가세요. 내가 요즘하는 동안 당신을 기억할 것입니다.
သားလဲ လိုက်မယ် ချန်မထားနဲ့ အယ် မီတော့ဘူး သူက သွားပြီး ပျော်ရွှင်ဖွယ် ခရီးစဉ်လေး ဖြစ်ပါစေ အမရေ.. ပြန်လာရင် ပုံတွေနဲ့ဘလော့လေးက အသက်ဝင်နေဦးမှာပေါ့။ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ထားပေးမယ် သားအတွက် အရုပ်ဝယ်လား အဟား ဟား
ma ma gyi ma bay dar,
buy for me more snacks... i will come and take at lobby(beside security).:)
အဲ့အယ် ........ ဘယ့်နှယ့်ကွယ်။ သွားခါနီးထိလို့ရေးပါဟ။ မြန်မာ စကားက အရေးမတတ်ရင် သိတယ်နော်။
မြန်မြန်ပြန်လာခဲ့ဟေ့.. ရောက်ရင် အဲကအတွေ့အကြုံတွေရေးပေး.. ဖတ်မလို့ စောင့်နေတယ်
5/07/2009 12:25 AM